Soomaalia oo nabad ah ilaahay hanatuso. Soomaali qabkeeyy nabada ku gaari lahaayd iyo prosperity way soo dhawdahay, qabyaalad la’aan wax lagu doorto ayuu hormat ku jiraa. Dowlad cadaalad ah
Dr Maslah hashi dhoore
waxaan diidn\_\_in soo diray qormo waxaan donayaa in ad soo gelisaan si dadka kale ay uga faa iideystaaan
| Sunday 3 May 2015
Xasan Sh. Maxamuud wuu nagu abgaaloobay. Qeybtii horee shirka wadatashiga ee Garowe, Xasan wuxuu iskaa yeelyeelaayay Caydiid /Caydiid. Aakhirkiina Puntland ayaa ka dhammeysatay sidii ay wax u rabtay.
Oday Duq ah baan ahay oo ku soo koray Banaadir iyo Xamar. Su’aasha weligey igu taagneyd waxay aheyd, welina tahay, Muddulood maxay uugu nugul yihiin Majeerteen? Majeerteen oo
1991-dii laga adkaaday oo la kufsaday, bay weli ka haybeysanayaan! Waa ku mucjisadaas.
Awal baa hore loo yiri: Waayeel Abgaal iyo weyl lo’aad, ninkii waraabsadaa wadaa! Xasan Sh. Maxamuud, isaga oo aan xataa la waraabin, baa wax kasta laga soo dhammeystay!
Yaa ii fasiri kara sababta ay Abgaal weligood ugu nugul yihiin Majeerteen?!
Xataa majeerteen la bara-bixiyay, la bililiqeystay, laga adkaaday, lagu sameeyay kasar sharaf, la dulleystay, cagta la mariyay?
Xasan Sh. Maxamuudow, Majeerteen ma jiree, ma qabrigiisaad caabudeysaa, Allaa faxane?!
Maxamed Ibraahim Cigaal baa laga hayaa inuu yiri: “Caydiid wuu gar daran yahay oo dameer iyo ninkii raran jiray buu kala horjoogaa!”
Halkii laga rari jiray baa cuncuneysa oo Xasan waa kaa Garowe u tegey si loo soo rarto.
Nasiib wanaag, Xasan ma awoodo inuu Majeerteen Xamar keeno oo uu saldanadiisii hore u soo celiyo e. Ee wuu yeeli lahaa hadduu awoodo.
Waxaa la yaab leh inaadan ka hadlin dadka xamar ka yimid oo warqadaha been abuurka wata oo qas wadayaasha ahaa iyo lacagtii qaranka oo nin shaqsi ah lagu dhisayo.
Waxaase wannagsan inaadan isku qarin qiic iyo boor ee aad bannaanka isi soo dhigto,oo caddaysto nacaybka aad u qabto cabdi qaybdiid.
Sida Daahir calasow dagaalkaaga caddayso Cali Siciidow.
Marka la fiiriyo waxaa tihiin websityada ugu macquulsan laakin mararka qaarkood sida markii aad ka hadlayseen furitaankii shirka gobolada dhexe waxaad sheegteen dadaka ka qudbeeyay madasha hadana waxaa ka mid ahaa madaxdii halakaas ka hadashay madaxwayne cabdi qaybdiid laakin idinku maydaan sheegin waxaadna ugu yeerteen hogaamiye taasoo kale waxay idiin arkayaa dadka taaageersan keydmedia oon anigu u horeeyo xadgudub waa mahadsantihiin
Asc walaaal waad ku mahadsantahay maqaalka wanaagsan aad soo qortay, fikirkeyga waxa weye dhibaatada Kenya bagu heyso waxa looga bixi karaa in la helo dowlad xoogan oo matasho wadanka oo dhan
| Friday 1 May 2015
Dastuurka iyo federaalkaba waxaa hooyadood ah Puntland.
Dabcan, aabbihiina waa Itoobiya.
Dastuurka iyo federaalkaba waa ilmoo wecello ah. Itoobiya ayaa xaraan uga dhashay Puntland.
Hadda Puntland wecelladeeda meeshii ayy doonto ha la aaddo.
Soomaali waa diidday in loo soo dhoweeyo ilmo xaraan ah.